Momba anay | Shijiazhuang Senlai Import sy Export trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Senlai Import and Export trade Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2012, dia miorina ao amin'ny Shijiazhuang City, Faritanin'i Hebei. Izahay dia matihanina mpanamboatra ny akanjon'ny ankizy, ny vokatra mihaona amin'ny fanamarinana oeko-tex 100 haavo 1.
Ny orinasa dia manana drafitra mandroso, teknolojia famokarana kanto ary ekipa mpiasa matanjaka. Manana laza sy laza matanjaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izy io, ary amidy tsara any avaratr'i Eropa sy Amerika Avaratra. Ny orinasa dia mizara ho departemanta orinasa, departemanta fitantanana filaminana, sampana fanodinana santionany, departemanta mividy lamba, departemanta tsirairay dia manana fizarana hentitra sy mazava momba ny asa, ho an'ny lamba fitafiana, kojakoja, bokotra ary lafiny hafa dia voafehy tsara, ny kalitao tsara no voalohany fanenjehana.
Niorina tao amin'ny
Shijiazhuang Senlai Import and Export trade Co., Ltd., naorina tamin'ny 2012.
Ny fahafahan'ny famokarana maherinay dia mihoatra ny 200000 isam-bolana.
Izahay dia matihanina mpanamboatra ny akanjon'ny ankizy, ny vokatra mihaona amin'ny fanamarinana oeko-tex 100 haavo 1.
Manaraka hatrany ny tanjon'ny orinasa "tsy fivadihana, fandresena, fanavaozana, fanaovana pragmatika" foana izahay.
Shijiazhuang Senlai manafatra sy manondrana varotra Co., Ltd. ny vokatra lehibe dia ny palitaon'ankizy, kitapo fatoriana zaza, bibikely ary akanjo vaovao an-jaza. Ny fahafahan'ny famokarana maherinay dia mihoatra ny 200000 isam-bolana. Ny orinasa dia manana endrika endrika matihanina, olona mpividy lamba lamba, mpiasa famokarana santionany. Ny mpiasa amin'ny famokarana fitafiana dia manana traikefa momba ny fiasan-damba amin'ny akanjo an-taonany maro, mahazatra ny toetran'ny kojakojam-pitafiana isan-karazany, mahafehy ny zavatra takiana amin'ny vokatra sy lamba samihafa amin'ny lamina. Fantatra amin'ny karazan'akanjo fanaovana takelaka akanjo rehetra, fametrahana ny lamina, lamina ary habe, fametrahana mahazatra sy fizotry ny famokarana, ary afaka mamita ny famokarana santionany isaky ny famolavolana araka ny fepetra takian'ny mpamorona. Niara-niasa tamin'ny orinasa vahiny maro izahay. Amin'ny maha-famolavolana akanjo, famokarana, serivisy amin'ny iray amin'ireo orinasan-damba matihanina, dia mifikitra hatrany amin'ny tanjona "fandresena, fandresena, fandrosoana, fikolokoloana". Manantena ny varotra sariaka kokoa amin'ny orinasan-damba maro kokoa.
Ny mpanjifanay dia voazara betsaka any avaratr'i Eropa sy Eropa. Ohatra, Danemark, Failandy, Norvezy, Islandy, Alemana, France, Japon ary toerana hafa. Noho ny toetrandro, toetrandro ary antony hafa any amin'ireny firenena ireny dia mety tsara amin'ny karazana fitafiantsika izy io. Mazava ho azy, ny Shijiazhuang Senlai manafatra sy manondrana varotra Co., Ltd. dia mandray ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao hanontany, hanome serivisy mahafa-po anao izahay.
Amin'ny maha-famolavolana akanjo, famokarana, serivisy amin'ny iray amin'ireo orinasan-damba matihanina, dia mifikitra hatrany amin'ny tanjona "fandresena, fandresena, fandrosoana, fikolokoloana". Manantena ny varotra sariaka kokoa amin'ny orinasan-damba maro kokoa.